ကလေး-ကလေးဝ လမ်းလမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် မလွတ်သည့် ကျူးကျော် ဈေးဆိုင်ခန်းများ သုံးလအတွင်း ဖယ်ရှ?? - Yangon Media Group
ကလေး-ကလေးဝ အထွက်လမ်းမကြီးတစ်နေရာကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-MOS)
မုံရွာ၊ စက်တင်ဘာ ၁၁
မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ်သွားကားလမ်းမကြီးဖြစ်သည့် မုံရွာ-ယာကြီး- ကလေးဝ-ကလေးမြို့ကားလမ်း၏ ကလေး-ကလေးဝကားလမ်း ကလေးမြို့အထွက်လမ်း နယ်နိမိတ် ပေ ၁ဝဝ အတွင်း၌ ကျူးကျော် နေထိုင်နေကြသည့်အိမ်များ၊ ဆိုင်ခန်းများနှင့်စိုက်ခင်းများကို သုံးလအတွင်း ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားရန် သတိပေးထားကြောင်း ကလေးမြို့ လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
”နိုဝင်ဘာလကုန်နောက်ဆုံးထားပြီးကျူးကျော်တွေအားလုံး ဖယ်ရှားပေးရမယ်။ လမ်းနယ်နိမိတ်ပေတစ်ရာအတွင်းမှာရောက်နေတဲ့ အိမ်တွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေ၊ စိုက်ခင်းတွေအားလုံးဖယ်ရမယ်။ ကလေးမြို့လမ်းဆုံကနေပြီး ကလေးမြို့မှ ကြိုဆိုပါ၏နေရာအထိ လမ်းကိုနိုင်လွန်ကတ္တရာခင်းမယ်”ဟု ကလေးခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ပြောသည်။
ကလေးမြို့စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကလေး- ကလေးဝ-မုံရွာ-မြန်မာ-အိန္ဒိယချစ် ကြည်ရေးလမ်းမကြီးကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လမ်းနယ် ပေ ၁ဝဝ အထိချဲ့ထွင်ပြီး ၃၆ ပေ နိုင်လွန်ကတ္တရာခင်းခြင်း၊ ကားရပ် နားနေရာများပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေ မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းကျ ရောက်နေသည့်အိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ စိုက်ခင်းများကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ရန် သတိ ပေးအကြောင်းကြားစာများပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ကလေးမြို့အနောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဘေးဝဲ ယာလမ်းနယ်နိမိတ်နှင့်မလွတ် ကင်းသည့်အဆောက်အအုံများကို ဖယ်ရှား၍ လမ်းအဆင့်မြှင့် တင်လျက်ရှိသည့်အပြင် ကျူးကျော်အဆောက်အအုံများနှင့်မြေများကို စာရင်းဇယားများပြုစုလျက်ရှိသည်။
ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ နှိုက် များလာသည့် မကွေးနှင့် တောင်တွင်းကြီး၌ တစ်ပတ်အတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ??
ရုံတင် ပထမပတ်မှာပင် စံချိန်တင်ဝင်ငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၅၃ သန်း ရရှိသွားသည့် '' The Nun (2018) ''
မန္တလေးမြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု ရက်သတ္တပတ် ကျင်းပမည်
မဟနနှင့် ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်း တို့အကြား အငြင်းပွားမှုကြောင့် သံဃာဂိုဏ်းကွဲခြင်းနှင်?